Isu tanga tichichinja vatengi kuenda kuGoogle Tag Manager nguva pfupi yadarika. Kana iwe usati wanzwa nezve tag tag parizvino, isu takanyora yakadzika-chinyorwa, Chii chinonzi Tag Management? - Ndinokukurudzira kuti uverenge kuburikidza nazvo.
Kunze kwebhenefiti yekumaka tag, Google Tag Manager ine imwe tsigiro yemuno yekushandisa seGoogle Analytics zvakare iwe yauchazoda kutora mukana. Nekuti yedu agency inoshanda zvakanyanya pane zvemukati marongero evatengi vedu, isu tiri kugadzirisa GTM kune edu vatengi. NeGoogle Tag Manager uye Universal Analytics, tinogona kumisikidza mamwe maonerwo neGoogle Analytics 'Zvemukati Mapoka tisingafanirwe kugadzirisa kodhi yekodhi pamasaiti evatengi vedu. Kugadzirira vaviri ava kuti vashande pamwe chete hakusi kwekushaya moyo, zvakadaro, saka ndinoda kukunyorera iwe.
Ini ndinonyora yemberi chinyorwa pakugadzira Zvemukati Mapoka neGoogle Tag Manager, asi yechinyorwa chanhasi, ndine zvibodzwa zvitatu:
Chinyorwa ichi hachina kungonyorerwa iwe, chaicho danho nedanho kune vedu vatengi zvakare. Izvo zvichatibvumidza isu kubata GTM kwavari uye kuenderera kune ese ari maviri ekugadzirisa kuti ekunze magwaro anotakurwa pamwe nekuvandudza kwavo Google Analytics kushuma.
Kana usati wambomisikidza Google Tag Manager account pamberi, pane yakanaka wizard yekukufambisa kuburikidza nekumisikidza yako yekutanga account uye mudziyo. Kana iwe usinganzwisise iyo verbiage yandiri kushandisa, ita shuwa kuti utarise vhidhiyo pane ino positi iyo inofamba iwe kuburikidza!
Kutanga, tumidza account yako. Kazhinji, iwe unozotumidza zita iro mushure mekambani yako kana chikamu kuitira kuti iwe ugone kuwana nekugadzirisa imwe neimwe yemasaiti nemaapplication iwe aungave neGoogle Tag Manager akaisirwa zvirinyore.
Teerera kwaunoisa kwaunoisa aya ma tag tag, zvakanyanyisa kukosha kune hunhu hwemamwe mateki auchazogadzirisa mukati meGoogle Tag Manager mune ramangwana!
Uchishandisa WordPress? Ndingakurudzira zvikuru iyo Duracelltomi Google Tag Manager WordPress Plugin. Patinogadzira Zvemukati Mapoka muGoogle Analytics, iyi plugin inogonesa maficha ane akavakirwa-mukati sarudzo dziri kuenda kukuserera yakawanda yekusuwa!
[box type = "warning" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Uchacherekedza kuti ndiri kupa kwese kuwana nemushandisi uyu. Iwe ungangoda kubata yako agency kuwana zvakasiyana. Kazhinji, iwe uchawedzera yako agency seMushandisi uye wozovapa kugona kweKugadzira asi kwete Shambadzira. Ungangoda kuchengetedza kutonga kweKuburitsa tag kushanduka. [/ Box]
Dzvanya ponesa uye iwe uchaona pfupiso yeshanduko dzawakaita. Ramba uchifunga kuti iyo tag haisati yaburitswa kune yako saiti - ndicho chinhu chikuru cheGTM. Iwe unogona kuita matani ekuchinja uye kuongorora ese marongero usati wafunga kushambadza shanduko dzirarama kune yako saiti:
Iwe uri wechokwadi fart smella - NDINOREVA - smart fella 🙂 Chinyorwa ichi chakakwana - chaizvo zvandaida kushandisa GTM. Koshesa screen screen